အချိန် ၅ မိနစ်ပဲ ရမယ်ဆိုရင် လှလှပပ မိတ်ကပ် Look ကလေးရလာအောင် ဘယ်လိုလိမ်းမလဲ? - For her Myanmar
အချိန် ၅ မိနစ်ပဲ ရမယ်ဆိုရင် လှလှပပ မိတ်ကပ် Look ကလေးရလာအောင် ဘယ်လိုလိမ်းမလဲ?
ကြာတယ်။ စာရွက်ထဲမှာ လိမ်းထားပြီး သွားခါနီးကျရင် ကောက်ကပ်ပစ်လိုက် 😛
ခေတ်မီတဲ့ မိတ်ကပ်လိမ်းဖို့အတွက် အချိန် (၃) နာရီလောက်ယူဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ စိုပြည်တဲ့အသားအရေ၊ ရွှန်းစိုတဲ့နှုတ်ခမ်းနဲ့ ပန်းနုရောင်သန်းတဲ့ ပါးမို့နှစ်ဘက်အတွက် အချိန် ၅ မိနစ်လောက်ရှိရုံနဲ့တင် အဆင်ပြေပါပြီ။ သိတဲ့အတိုင်း ၅ မိနစ်ဆိုတာ အရမ်းနည်းပါးတဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာဆိုတော့ မေးရိုးချတာ၊ မျက်တောင်အတုတပ်တာ၊ လိုင်နာအချွန်အတက်တွေ ဆိုးတာနဲ့ ပြောင်ပြောင်လက်လက် မျက်လုံးရှဲဒိုးတွေ မပါပါဘူးနော်။ တကယ့်အခြေခံမိတ်ကပ်အဆင့် ၆ ဆင့်ပဲ ပါဝင်မှာပါ။
(၁) အရင်ဆုံး မျက်နှာသစ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ်လုပ်နေကျ အသားအရေထိန်းသိမ်းတဲ့ အဆင့်တွေအားလုံးကို အရင်လုပ်ထားပါ။ (ဇိမ်ဆွဲပြီး ပွတ်မနေနဲ့နော်။ လက်နဲ့သာပွတ်ပစ်။)
ကဲ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပွတ်မယ်
(၂) Skincare လိမ်းပြီး မိတ်ကပ်တန်းလိမ်းရင် မျက်နှာက မည်းသွားတတ်တာမို့ ခဏစောင့်ရပါတယ်။ အဲဒီလို စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာ မျက်ခုံးမွေးဆွဲပါ။ မျက်ခုံးမွေးကိုလည်း ကိုယ့်ရဲ့ရှိပြီးသားမျက်ခုံးပုံအတိုင်းပဲ ပေါင်ဒါလေးနဲ့ဖြည့်ပြီး ဆွဲပါ။ အကယ်၍ ကိုယ်က မျက်ခုံးရှိပြီးသား လူဆိုရင်တော့ ဘရပ်ရ်ှလေးနဲ့ နည်းနည်းပုံကျသွားအောင် ဖြီးလိုက်ရင်အဆင်ပြေပါပြီ။
မျက်ခုံးမွေးကို ပေါက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲဆွဲနော်။ လွယ်လည်းလွယ် မြန်လည်းမြန်တယ်
(၃) မိတ်ကပ်စလိမ်းပါပြီ။ မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အခါ တခြားဆွဲရပြုရခက်တဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းတွေ ဘာဘာညာညာတွေအစား တစ်ခုတည်းမှာ အကုန်ပါတဲ့ ကူရှင်မိတ်ကပ်ကိုရွေးပါ။ ကိုယ့်မျက်နှာမှာ အဖုအပိန့် ဘာဘာညာညာသိပ်မရှိရင်တော့ ကွန်ဆီလာအဆင့်ကို ကျော်လို့ရပါတယ်။
ကူရှင်ကို တဘုတ်ဘုတ် ပုတ်မယ်
(၄) ပြုံးလိုက်ပါ။ ပြုံးလိုက်တဲ့အခါ တက်လာတဲ့ ပါးမို့နှစ်ဘက်ကို ပန်းနုရောင်ပါးနီလေးတွေကို စက်ဝိုင်းပုံစံ ခြယ်လိုက်ရုံနဲ့ သွေးရောင်သန်းတဲ့ ပါးလေးကို ပိုင်ဆိုင်စေမှာပါ။ (ပါးနီကို တတ်နိုင်ရင် သဘာဝဆန်တဲ့ ပန်းနုရောင်၊ မက်မွန်သီးရောင်လေးတွေကို သုံးပါ။ ဒါမှ အချခံထားရသလို ဖြစ်မနေမှာ :P)
(၅) နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ မျက်တောင်ကော့လိုက်ပါ။ အပေါ်မျက်တောင်ရဲ့ အရင်းကနေ ဘေးဘယ်ညာနှစ်ဖက် ကော့တင်ရင်း ထူထဲပြီး ဖြာထွက်နေတဲ့ အသွင်ကို ရယူလိုက်ပါ။ (နှာမချေရနော် မဟုတ်ရင် အကုန်ပျံ့ကုန်ပြီး ပရမ်းပတာတွေ ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်။)
Related Article >>> တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ဘယ်နေရာတွေ အပေါက်ဖောက်လို့ရလဲ?
(၆) နောက်ဆုံးကတော့ နှုတ်ခမ်းနီပါပဲ။ အသားရောင်နှုတ်ခမ်းနီလေးကို လက်လေးနဲ့ပုတ်ပုတ်ပြီး ဆိုးလိုက်ပြီးရင်တော့ မိတ်ကပ်အဆင့်က အားလုံးပြီးသွားပါပြီ။ (နှုတ်ခမ်းနီကိုလည်း အသားရောင်၊ ပန်းနုရောင်လေးတွေ သုံးပေးနိုင်ရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။)
Matte တွေဘာညာတွေ လုပ်မနေနဲ့ ခရင်မ်အချောင်းသာဆောင်ထား
ကဲ ဒါဆိုအားလုံးပြီးပြီ။ မိတ်ကပ်စပရေးလေး ဖျန်းလိုက်တော့။ ဒါနှင်းရဲ့ မနက်ခင်း မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ အဆင့်တွေပါ။ (တကယ် ၅ မိနစ်အတွင်း ပြီးပါတယ်နော်) ဆိုတော့ကာ မနက်အိပ်ယာထနောက်ကျတဲ့ ယောင်းယောင်းလေးတွေအတွက် အရမ်းအသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ် 😛 ဒါပေမဲ့ ၅ မိနစ်ဆိုတော့ ပွဲတက်သလိုမျိုး အပြည့်အစုံတော့ မရနိုင်ဘူးလေနော့်။ ထသွားထလာ သပ်သပ်ရပ်ရပ်တော့ ဖြစ်နေမှာပါနော်။
အိပ်ရာထနောက်ကျလည်း ဖရိုမရဲမဖြစ်စေချင်တဲ့ စေတနာဗလပွနဲ့…
ကွာတယျ။ စာရှကျထဲမှာ လိမျးထားပွီး သှားခါနီးကရြငျ ကောကျကပျပဈလိုကျ 😛
ခတျေမီတဲ့ မိတျကပျလိမျးဖို့အတှကျ အခြိနျ (၃) နာရီလောကျယူဖို့ မလိုအပျပါဘူး။ စိုပွညျတဲ့အသားအရေ၊ ရှနျးစိုတဲ့နှုတျခမျးနဲ့ ပနျးနုရောငျသနျးတဲ့ ပါးမို့နှဈဘကျအတှကျ အခြိနျ ၅ မိနဈလောကျရှိရုံနဲ့တငျ အဆငျပွပေါပွီ။ သိတဲ့အတိုငျး ၅ မိနဈဆိုတာ အရမျးနညျးပါးတဲ့ အခြိနျအတိုငျးအတာဆိုတော့ မေးရိုးခတြာ၊ မကျြတောငျအတုတပျတာ၊ လိုငျနာအခြှနျအတကျတှေ ဆိုးတာနဲ့ ပွောငျပွောငျလကျလကျ မကျြလုံးရှဲဒိုးတှေ မပါပါဘူးနျော။ တကယျ့အခွခေံမိတျကပျအဆငျ့ ၆ ဆငျ့ပဲ ပါဝငျမှာပါ။
(၁) အရငျဆုံး မကျြနှာသဈပွီးပွီဆိုတာနဲ့ ကိုယျလုပျနကြေ အသားအရထေိနျးသိမျးတဲ့ အဆငျ့တှအေားလုံးကို အရငျလုပျထားပါ။ (ဇိမျဆှဲပွီး ပှတျမနနေဲ့နျော။ လကျနဲ့သာပှတျပဈ။)
ကဲ မွနျမွနျဆနျဆနျ ပှတျမယျ
(၂) Skincare လိမျးပွီး မိတျကပျတနျးလိမျးရငျ မကျြနှာက မညျးသှားတတျတာမို့ ခဏစောငျ့ရပါတယျ။ အဲဒီလို စောငျ့နတေဲ့အခြိနျမှာ မကျြခုံးမှေးဆှဲပါ။ မကျြခံးမှေးကိုလညျး ကိုယျ့ရဲ့ရှိပွီးသားမကျြခုံးပုံအတိုငျးပဲ ပေါငျဒါလေးနဲ့ဖွညျ့ပွီး ဆှဲပါ။ အကယျ၍ ကိုယျက မကျြခုံးရှိပွီးသား လူဆိုရငျတော့ ဘရပျရျှလေးနဲ့ နညျးနညျးပုံကသြှားအောငျ ဖီးလိုကျရငျအဆငျပွပေါပွီ။
မကျြခုံးမှေးကို ပေါကျထားတဲ့လမျးကွောငျးအတိုငျးပဲဆှဲနျော။ လှယျလညျးလှယျ မွနျလညျးမွနျတယျ
(၃) မိတျကပျစလိမျးပါပွီ။ မိတျကပျလိမျးတဲ့အခါ တခွားဆှဲရပွုရခကျတဲ့ ဖောငျဒေးရှငျးတှေ ဘာဘာညာညာတှအေစား တဈခုတညျးမှာ အကုနျပါတဲ့ ကူရှငျမိတျကပျကိုရှေးပါ။ ကိုယျ့မကျြနှာမှာ အဖုအပိနျ့ ဘာဘာညာညာသိပျမရှိရငျတော့ ကှနျဆီလာအဆငျ့ကို ကြျောလို့ရပါတယျ။
ကူရှငျကို တဘုတျဘုတျ ပုတျမယျ
(၄) ပွုံးလိုကျပါ။ ပွုံးလိုကျတဲ့အခါ တကျလာတဲ့ ပါးမို့နှဈဘကျကို ပနျးနုရောငျပါးနီလေးတှကေို စကျဝိုငျးပုံစံ ခွယျလိုကျရုံနဲ့ သှေးရောငျသနျးတဲ့ ပါးလေးကို ပိုငျဆိုငျစမှောပါ။ (ပါးနီကို တတျနိုငျရငျ သဘာဝဆနျတဲ့ ပနျးနုရောငျ၊ မကျမှနျသီးရောငျလေးတှကေို သုံးပါ။ ဒါမှ အခခြံထားရသလို ဖွဈမနမှော :P)
(၅) နောကျတဈဆငျ့ကတော့ မကျြတောငျကော့လိုကျပါ။ အပျေါမကျြတောငျရဲ့ အရငျးကနေ ဘေးဘယျညာနှဈဖကျ ကော့တငျရငျး ထူထဲပွီးဖွာထှကျနတေဲ့အသှငျကို ရယူလိုကျပါ။ (နှာမခရြေနျော မဟုတျရငျ အကုနျပြံ့ကုနျပွီး ပရမျးပတာတှေ ဖွဈကုနျလိမျ့မယျ။)
Related Article >>> တဈကိုယျလုံးမှာ ဘယျနရောတှေ အပေါကျဖောကျလို့ရလဲ?
(၆) နောကျဆုံးကတော့ နှုတျခမျးနီပါပဲ။ အသားရောငျနှုတျခမျးနီလေးကို လကျလေးနဲ့ပုတျပုတျပွီး ဆိုးလိုကျပွီးရငျတော့ မိတျကပျအဆငျ့က အားလုံးပွီးသှားပါပွီ။ (နှုတျခမျးနီကိုလညျး အသားရောငျ၊ ပနျးနုရောငျလေးတှေ သုံးပေးနိုငျရငျ ပိုအဆငျပွပေါတယျ။)
Matte တှဘောညာတှေ လုပျမနနေဲ့ ခရငျမျအခြောငျးသာဆောငျထား
ကဲ ဒါဆိုအားလုံးပွီးပွီ။ မိတျကပျစပရေးလေး ဖနျြးလိုကျတော့။ ဒါနှငျးရဲ့ မနကျခငျး မိတျစကပျလိမျးတဲ့ အဆငျ့တှပေါ။ (တကယျ ၅ မိနဈအတှငျး ပွီးပါတယျနျော။) ဆိုတော့ကား မနကျအိပျယာထနောကျကတြဲ့ ယောငျးယောငျးလေးတှအေတှကျ အရမျးအသုံးဝငျမယျထငျပါတယျ 😛 ဒါပမေဲ့ ၅ မိနဈဆိုတော့ ပှဲတကျသလိုမြိုး အပွညျ့အစုံတော့ မရနိုငျဘူးလနေေျာ့။ ထသှားထလာ သပျသပျရပျရပျတော့ ဖွဈနမှောပါနျော။
အိပျရာထနောကျကလြညျး ဖရိုမရဲမဖွဈစခေငျြတဲ့ စတေနာဗလပှနဲ့…
Tags: 5,5minutes makeup, Beauty, makeup, mins, quick, tips
Hnin Ei Oo October 3, 2018